Ity ny politikan'ny opskar.com hanaja ny fiainanao manokana momba izay fampahalalana azonay angonina mandritra ny tranokalanay.
Tahaka ny ankamaroan'ny mpandraharaha tranokala, ny OPS dia manangona fampahalalana tsy miankina amin'ny tena manokana momba ny karazan-java-bidy atokana ho an'ny mpizaha tranonkala sy ny mpizara, toy ny karazana browser, ny safidin'ny fiteny, ny tranokala miresaka ary ny daty sy ora isian'ny fangatahan'ny mpitsidika tsirairay. ny fanangonana fampahalalana tsy miankina amin'ny tena dia ny fahafantarana tsara kokoa ny fomba fampiasan'ny mpitsidika ny OPS ny tranokalany. Indraindray, ny OPS dia afaka mamoaka vaovao tsy miankina amin'ny besinimaro ao anaty vondrona, ohatra, amin'ny famoahana tatitra momba ny fironana amin'ny fampiasana ny tranokalany.
OPS koa dia manangona ireo fampahalalana manokana manokana toy ny Internet Protocol (IP) ho an'ny mpampiasa azy ary ho an'ireo mpampiasa mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ny blogs / sites opskar.com. Ny OPS ihany no mamoaka ny adiresy IP sy ny mpamaritra amin'ny anaran'ny mpampiasa amin'ny toe-javatra mitovy amin'izay ampiasainy sy manambara ny fampahalalam-baovao manokana araka izay voafaritra etsy ambany, afa-tsy ireo mpitantana ny adiresy IP sy ny adiresy mailaka no hita sy ny mombamomba ireo mpandrindra ny blôgy / dia lasa.
Ny mpitsidika sasany ao amin'ny tranonkalan'ny OPS dia misafidy ny hifanerasera amin'ny OPS amin'ny fomba izay mitaky OPS hanangona vaovao hahafantarana azy manokana. Ny habetsaky ny karazana fampahalalana izay angonin'ny OPS dia miankina amin'ny toetran'ny fifandraisana. Ohatra, mangataka amin'ireo mpitsidika izay misoratra anarana ao amin'ny ospkar.com izahay mba hanome solonanarana sy adiresy mailaka. Ireo izay manao raharaham-barotra amin'ny OPS dia asaina manome fampahalalana fanampiny, ao anatin'izany ny fampahalalana manokana sy ara-bola ilaina amin'ny fikarakarana ireo fifanakalozana ireo. Amin'ny tranga roa, ny OPS dia manangona izany fampahalalana izany raha tsy ilaina na mety hanatanterahana ny tanjon'ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny OPS. Ny OPS dia tsy manambara ny mombamomba anao manokana hafa ankoatry ny voalaza etsy ambany. Ary ny mpitsidika dia mety mandà tsy hanome fampahalalana mombamomba azy manokana, miaraka amin'ny fampitandremana mety hanakana azy ireo tsy hanao hetsika sasany mifandraika amin'ny tranonkala.
OPS dia afaka manangona antontan'isa momba ny fitondran-tenan'ireo mpitsidika ao amin'ny tranonkala. OPS dia afaka mampiseho mivantana ampahibemaso na manome izany amin'ny hafa. Na izany aza, ny OPS dia tsy mamoaka ny vaovao miseho manokana fa tsy ny voalaza etsy ambany.
OPS dia mampahafantatra izay mety ho fampahafantarana manokana sy hamantatra manokana ireo mpiasa ao aminy, ireo mpifanaraka aminy ary ireo fikambanana misy azy izay (i) mila mahafantatra izany fampahalalana izany mba hikirakira azy amin'ny anaran'ny OPS na hanome serivisy misy amin'ny tranokalan'ny OPS, ary ( ii) izay nanaiky tsy hampahafantatra izany amin'ny hafa. Ny sasany amin'ireo mpiasa ireo, mpifanaraka ary fikambanana mifandraika dia mety ho any ivelan'ny tanindrazanao; amin'ny alàlan'ny fampiasana tranokalan'ny OPS dia manaiky ny famindrana izany torohay izany ianao. Ny OPS dia tsy hanofa na hivarotra fampahalalana mety hahafantatra-tena sy hahafantatra manokana an'iza na iza. Hafa noho ny mpiasa ao aminy, ny mpifanaraka aminy ary ny fikambanana mifandraika aminy, araka ny voalaza etsy ambony, ny OPS dia mamoaka vaovao mety hahalalana ny tena manokana sy hamantatra manokana raha tsy ny valin'ny taratasy fangatahana, didim-pitsarana na fangatahana governemanta hafa, na rehefa mino ny OPS amin'ny finoana tsara fa ny fanambarana dia ilaina ara-dalàna mba hiarovana ny fananana na ny zon'ny OPS, ny antoko fahatelo na ny besinimaro amin'ny ankapobeny. Raha mpampiasa voasoratra anarana ao amin'ny tranokala OPS ianao ary nanome ny adiresy mailaka nataonao, OPS indraindray dia mety mandefa anao mailaka hilaza aminao momba ny fiasa vaovao, hangataka ny valinteninao, na hampazoto anao hatrany ny zava-mitranga amin'ny OPS sy ny vokatra. Raha mandefa fangatahana aminay ianao (ohatra amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo fomba fijerinay), dia zonay ny hamoaka izany mba hanampiana anay hanazava na hamaly ny fangatahanao na hanampy anay hanohana ireo mpampiasa hafa. Ny OPS dia mandray ny fepetra rehetra ilaina mba hiarovana amin'ny fidirana tsy ara-dalàna, ny fampiasana, ny fanovana na ny fanimbana ny fampahalalana mety hahafantarana azy manokana sy hahafantarana anao manokana.
Ny cookie dia andinam-baovao izay mitahiry tranokala amin'ny solo-sain'ny mpitsidika, ary omen'ny mpijery mpitsidika ny tranokala isaky ny miverina ilay mpitsidika. Mampiasa cookies ny OPS hanampiana ny orinasanao hahafantatra sy hanaraka ny mpitsidika, ny fampiasan'izy ireo ny tranonkala OPS, ary ny safidiny amin'ny fidirana amin'ny tranokalan'izy ireo. Ireo mpitsidika OPS izay tsy maniry ny hametrahana cookies amin'ny solo-sain'izy ireo dia tokony hametraka ny mpizaha azy handà ny cookies alohan'ny hampiasana ny tranonkalan'ny OPS, miaraka amin'ny fihenan-tsasatra fa ny fiasa sasany amin'ny tranokalan'ny OPS dia mety tsy hiasa tsara raha tsy misy fanampiana avy amin'ny cookies.
Raha azo trandrahina ny OPS, na ny ankamaroany, na amin'ny tranga tsy ampoizina mety hitranga amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny orinasa na ny banky, ny fampahalalam-baovao dia iray amin'ny fananana izay nafindra na noraisin'ny antoko fahatelo. Miaiky ianao fa mety hitranga ny fifindrana, ary mety ho afaka hampiasa ny fampahalalanao manokana izay voalaza ato amin'ity politika ity ny mpividy ny OPS.
Ny dokambarotra miseho ao amin'ny tranonkalanay dia azo atolotra amin'ireo mpisera avy amin'ny dokambarotra, izay mety mametraka cookies. Ireo cookies dia mamela ny mpizara dokambarotra hamantatra ny solosainao isaky ny mandefa anao dokambarotra an-tserasera mba hanangonana vaovao momba anao na ireo hafa mampiasa ny solosainao. Ity fampahalalana ity dia ahafahan'ny tambajotra an-tserasera manolotra dokam-barotra vitsivitsy izay heveriny fa tena mahaliana anao. Ity Politika ity dia manazava ny fampiasana cookies amin'ny OPS ary tsy mamela ny fampiasana cookies amin'ny mpividy rehetra.
Na dia mety ho kely aza ny ankamaroan'ny fanovana, OPS dia mety manova ny politikany momba ny tsiambaratelo indraindray, ary amin'ny fahefan'ny ops fotsiny. Mamporisika ny mpitsidika ny OPS mba hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana amin'ny politikany momba ny fiainana manokana. Raha manana kaonty opskar.com ianao, dia mety hahazo fampandrenesana hampahafantatra anao ireo fanovana ireo ihany koa. Ny fampiasanao ity tranokala ity hatrany aorian'ny fanovana an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia hanaiky ny fanovana toy izany.